Sezindiza Gomel: izici indawo
Uma uke waba eBelarus, kungenzeka ujwayelene sezindiza kanye emzini Gomel. Udume kakhulu akamukeli izindiza yasekhaya kodwa ngamazwe kuphela, kuhlanganise aircraft zonke izindiza Russian. Namuhla Gomel Airport bekulokhu isihloko lesi sihloko.
Gomel Airport kuhlehlela emuva forties kwekhulu elidlule. Ekuqaleni, lanikeza imizila yasekhaya kuphela eduzane, phakathi kwabo, evulekile kuphela efanelekayo zezindiza wezolimo. Eduze sezindiza based emoyeni ambulensi ingxenye, kwaba ethandwa kakhulu phakathi nempi.
Ngu ngeminyaka yoma ekuqaleni kwekhulu elidlule Airport Gomel Uthole evulekile ezintsha futhi aqala ukuwuthwala abagibeli ezweni endaweni ye-USSR. Izindiza Kwakwenziwe izinkomba eningizimu nasenyakatho.
Esikhathini nineties zakuqala Gomel sezindiza wathola isimo wezizwe eside elindelwe, futhi waqala ukungena inkontileka ngesondlo izinkampani ezinkulu European maphepha. Manje sezindiza iyaqhubeka nokusebenza charter emoyeni zenethiwekhi, kule sizini ehlobo inani izindiza kwandisa ngenxa imizila yasekhaya okuhleliwe.
Gomel Isikhumulo sezindiza: ulwazi olujwayelekile
sezindiza ukhonza inkampani Belarusian "Belavia", yena wenza zonke izinhlobo zokuthutha:
Lesi sakhiwo sezindiza abasebenza ubusuku nemini. . The ukuphela umgibeli iphatha abantu abangaba yizigidi ezingu-45 abagibeli ngonyaka. Gomel Airport has izakhiwo ezimbili, yakhiwa kuleli forties enye yazo. Eyesibili has a date yakamuva kakhulu ukwakhiwa (1985), futhi omunye esibulalayo, ehhotela kwakhiwa negumbi lokudlela ethokomele.
Esikhathini esithile esidlule, Gomel sezindiza, izindiza kukhona charter elinganiselwe izinkampani maphakathi no-level, kuba ngesisekelo yendiza yimali "Gomelavia". Evulekile awukwazi ukuthatha zonke izindiza, ke kukhawulwe amandla esithwele ka nekhulu namashumi ayisikhombisa ithani elilodwa. Ngakho-ke, ezinye izindiza ayikwazi ukusungula ngokubambisana neNhlangano sezindiza ngaphambi ukwakhiwa evulekile entsha.
Uma lisuka usuka Gomel sezindiza, khumbula ukuthi akukho umthamo ukubhaliswa electronic. Kumele avele phambi edeskini reception kuze kuphele amahora amabili nesigamu ngaphambi kokuba ahambe aye uma kuyinto indiza international. On imizila yasekhaya yokubhalisa kuvula amahora amabili. Cishe imizuzu engamashumi amane ngaphambi indiza, bonke abagibeli kufanele kubhaliswe.
Gomel Isikhumulo sezindiza: indlela ukuya enkabeni yedolobha
Settlement has a evuthiwe inethiwekhi ezokuthutha zomphakathi. Ngaphezu kwalokho, esikhumulweni sezindiza iseduze komuzi umkhawulo imingcele. Ngokwesibonelo, maphakathi engafinyelelwa, zokunqoba amakhilomitha nanye kuphela. Big isiminyaminya ku Gomel ayikho imigwaqo, ngakho-ke lokhu ibanga, ungenawo ngisho ukuwuzwa.
Phakathi kwedolobhakazi kanye sezindiza siphela umzila olukhethekile, uxhuma amaphuzu amabili kuphela ngezinsuku lapho kwenziwe kusukwe omhlaba kanye ezifuywayo. Ngaphezu ibhasi njalo umzila, ungakwazi ukufinyelela by ezokuthutha zomphakathi. Ngenxa yale njongo, itekisi ezifanele anesithoba ibhasi imigqa. Bavumela abagibeli ukuze uthole ngokuphelele kuphi emzini, futhi amabhasi ukuxhuma sezindiza kanye Emaphethelweni Gomel.
Namuhla, abaphathi idolobha usebenzela kabusha sezindiza. Esikhathini esizayo esiseduze ukuze sandise zezindiza kanye nokwakha isakhiwo esisha sesimanje, okuzokwenza ukwethula entsha njalo izindiza ngamazwe nokubambisana abathwali eziyinhloko zaseYurophu.
Lapho izindiza undiza kusukela Lappeenranta? Yikuphi izindiza undiza kusukela Lappeenranta? Likuphi Lappeenranta
Into ebaluleke kakhulu odinga ukukwazi mayelana izindiza B 757-200
Stevia - kuyini? Stevia: izakhiwo ewusizo, ukutshalwa, ukunakekelwa
Umlingisikazi Cassandra Peterson: Biography, izithombe. movie aphezulu
Ososayensi baye ekugcineni ukwazi wokufunda ebusweni izinkulumo amakati
"Izindleko zezinkathi zesikhathi esizayo": zibakhathalela ngani? Ukuthumela nokubhala izindleko zesikhathi esizayo
Kanjani ukuyenga owesifazane ngokuqinisekile?